IIKHITHI ZEKHAYA LASEBARN (IINDIDI, IZIXHOBO KUNYE NAMAXABISO) - UYILO LWENDLU
Eyona uyilo Lwendlu Iikhithi zeKhaya laseBarn (Iindidi, izixhobo kunye namaxabiso)
Iikhithi zeKhaya laseBarn (Iindidi, izixhobo kunye namaxabiso)
Apha sabelana ngesikhokelo sethu sogcina iikiti zasekhaya kubandakanya iintlobo ezidumileyo, izixhobo ezisetyenzisiweyo kunye neendleko. Ikhithi yasekhaya yokugcina iyiprojekthi eyenziwe kwangaphambili ebandakanya zonke izinto ezifunekayo ukuqala ukwakhiwa kwendlu yokugcina.
Oku kunokubandakanya amaplanga ezithuba kunye nemiqadi, izinto zangaphakathi nezangaphandle zodonga, ezinye izinto zokwakha, kwaye kunjalo kunye nencwadana yemiyalelo ngokwendlela yeeplani zeenkcukacha.
Iindidi zeeKhithi zeBarn House
Izixhobo zeKhaya lePole Barn
Iikiti zokuqala zasekhaya zeBarn
Izixhobo ezisetyenziselwa iiKhithi zaseKhaya zeBarn
Iikiti zeKhaya le-Metal Barn
Iposi kunye neBam
Amaxabiso eKits zeNdlu
Ngaba Amakhaya eBarn ayabiza ngexabiso eliphantsi ukwakha?
Ngaba Iikiti Zendlu Zifanele?
Njengekhithi ekhethiweyo, iikiti zokugcina izindlu aziboneleli ngokwezifiso ezininzi, kodwa kukho iintlobo ezimbalwa zeekiti onokuzikhetha.
Ngaphezulu kwenkampani nganye inesitayile esahlukileyo okanye indlela yokwakha, enokutshintsha ukujonga ngokubanzi. Ezinye zeendidi onokuzikhetha kunye nezibonelelo zazo zichazwe apha ngezantsi.
Jonga esi sicwangciso seplani yendlu enevaranda enkulu egutyungelweyo kule linki [ixhasiwe]
izimemo zomtshato amagama avela kumyeni nomyeni
Iipali zokugcina iitayile zasekhaya zahlukile kwikhaya eliqhelekileyo kuba kwiimeko ezininzi, azikho iziseko ezifunekayo. Endaweni yoko, izibonda ziqhutywa emhlabeni ukuze zisebenze njengenkxaso yeepaneli zentsimbi. Olu hlobo lwekhaya lwasekhaya lukhawuleza kwaye kulula ukwakha kunamakhaya aqhelekileyo.
Ezi ntlobo zeekiti zifumaneka kwiivenkile zokuphucula ikhaya okanye zithunyelwe kwindawo efunwayo ukusuka kwimithombo ye-Intanethi. Iikiti ziza nazo zonke izinto ezifunekayo ukwakha ipali yekhaya.
Iipali zekhaya zokugcina iiplanga azidingi okanye zibandakanya oku kulandelayo: ukugquma, imigangatho, iingcango zeHVAC, okanye imibhobho yamanzi Ukuba ezi ziya kuba yimfuneko iya kuba yindleko eyongezelelweyo kunye nento efuna ukuthengwa ngokwahlukeneyo.
Ngokusekwe kwikhithi ethile ofikayo kunokongezwa okwahlukileyo kwizinto okanye zinokufakwa kwiphakheji iyonke. Bona eminye imifanekiso Uyilo lweplanga lendlu kweli phepha.
Ikhithi yekhaya yokugcina eyakhelweyo yahlukile kuzo zombini iipali zebarn zasekhaya kunye nekhaya eliqhelekileyo, ngendlela enye enkulu. Amakhaya asele ekhethwe ngaphambili abekwa ndawonye ngaphandle kwesiza, emva koko athunyelwe kuloo ndawo, ngokufanayo nokuba uthenge ishedi kwivenkile yokuphucula ikhaya.
Amakhaya asele ekhethiwe anendawo ezimbalwa ezinikiweyo zoyilo kunye noyilo, kwaye zinokubakho kancinci njengoko kufuneka. Ezi ntlobo zamakhaya oovimba zinezinto ezifanayo ezibandakanyiweyo njengezindlu zepali kodwa azifuni ukuba uzakhe ngokwakho.
Amakhaya akhethwe kuqala angabiza kakhulu, ngenxa yomsebenzi owenzileyo ukwakha indlu, kodwa inokugcina kubakhi abaziingcali ekuhambeni kwexesha.
Kuyafana nakwisixhobo sendawo yokugcina iipali amakhaya awadingi okanye angabandakanyi oku kulandelayo: ukugquma, imigangatho, iingcango zeHVAC, okanye imibhobho yamanzi.
amakhaya eepali ezincinci
Ukuba ezi zinto ziya kuba yimfuneko iya kuba yindleko eyongezelelweyo kunye nento efuna ukuthengwa ngokwahlukeneyo, kodwa kufuneka ithathelwe ingqalelo xa ikhaya lisenza umenzi. Ukuba unqwenela, ezinye zezi zinto zinokongezwa okanye zibandakanywe kwiprojekthi.
Izinto eziphambili ezisetyenziselwa ukugcina izixhobo zasekhaya ziyintsimbi okanye ukhuni. Nangona kunjalo, amakhaya amaninzi asebenzisa izitena kunye nokubekwa ngamatye kunye neepaneli zesamente.
Amakhaya esinyithi enziwe ngeentsika zesinyithi eziqhotyoshelwe kwiiphaneli zentsimbi ecaleni kwekhaya. Ezi khithi zihlala zibandakanya izinto zentsimbi zemibhobho, imiqadi, ukubiyela, njl.
Kukwakho nezinto zokuphahla ngokwendalo, iingcango zangaphandle, kunye nezithintelo zomphunga ezifunekayo kumakhaya ogcino lwentsimbi.
Amakhaya esinyithi alungile kuba awanako ukwahlulahlula, ukuqhekeka okanye ukubhabha, kwaye awunakutsha.
Iposti kunye nomqadi zenziwe ngeepali zokwakha. Ezi khithi zihlala zibandakanya amaplanga anzima emiqadi, imiqadi, ukubiyela, njl. Njl. Kukwakho nezinto zokuphahla, iingcango zangaphandle kunye nezithintelo zomphunga.
Kukho izinto ezimbalwa ezinokuchaphazela kakhulu ixabiso lekhithi yendlu yokugcina, kodwa ixabiso eliphakathi kwikhaya lesibonda linokuba malunga ne-50,000 ukuya kwi-70,000 yeedola. Izinto ezinokutshintsha ixabiso lekhiti yekhaya, ezinye zichazwe ngezantsi.
Ukulungiswa ngaphakathi Ikhithi yendlu yokugcina ibuya nezinto eziyimfuneko kunye nemiyalelo yokwakha indlu, kodwa uyilo lwangaphakathi luxhomekeke kuwe.
Ukongeza i-casework, ipeyinti, izixhobo zombane, ifanitshala, njl.njl. Zonke ezo zinto zongezwa kwiindleko zendlu yokugcina.
Ngokusekwe kwisitayile esigqityiweyo, ukongezwa kwexabiso kunokuhluka. Umgangatho unokuba malunga ne-1000 ukuya kwi-5000 yeedola ngokuxhomekeka kuhlobo. Ukupeyinta kunokuba malunga ne- $ 1,000. Iminyango kunye neefestile zinokuba malunga ne- $ 2,500 nganye.
Iziseko ezifunekayo : Ngelixa lelona candelo likhulu lokugcina iindleko zale ndlela yokwakha, kwezinye iimeko kunokubakho isiseko esifunekayo.
Iindawo ezithile kunye neemfuno zalapha ekhaya zinokuchaphazela isidingo sesiseko esibizayo. Iziseko kufuneka zenziwe yingcali. Oku kunokuba yi- $ 26,000 eyongezelelweyo okanye nangaphezulu.
Izixhobo Indawo yokubambisa ayifakwanga kwikhithi, enokuba ngumsebenzi onzima kunye nokongezwa kwamaxabiso amakhulu ngokusekwe kwindawo kunye neemfuno zasekhaya.
Le yinto enokufuna ukwenziwa yingcali, enokuphakamisa ixabiso lentengo liphela. Imibhobho inokubiza i- $ 10,000 okanye nangaphezulu, umbane unokuba yi- $ 2,500, kwaye i-septic inokuba malunga ne- $ 3,000 ukuya kwi-9,500 eyongezelelweyo.
Abakhi abaqeqeshiweyo Njengoko kukhankanyiwe ngezinto zoncedo, iingcali zisenokufuna ukubizelwa ngaphakathi. Ukuba awungomntu onamava, okanye nokuba unamava uzenzele ngokwakho, kusenokwenzeka ukuba kukho iinxalenye ezithile zenkqubo oza kufuna ukudibana nengcali.
Oku kunokuba longezo olukhulu kwixabiso, kodwa ukuphuma ngaphandle kunokubangela iimeko ezingalunganga okanye eziyingozi.
Jonga esi sicwangciso segaraji sasekhaya segaraji kule linki [ixhasiwe]
Indlu yokugcina ingabizi ngexabiso eliphantsi ukuyakha kunekhaya eliqhelekileyo, ngakumbi ukuba yenziwe njenge-DIY njengoko kufanelekile ukuba yenzeke. Oku konga kwimisebenzi ebiza kakhulu edla ngokwakhiwa ukwakha ikhaya eliqhelekileyo. Ngelishwa, le projekthi ye-DIY inkulu kakhulu kwaye ifuna uninzi lwezakhono kwiqela elenza iprojekthi.
Ngokwesiqhelo iikhithi zendlu yokugcina zingabaleka naphi na ukusuka kwi- $ 4,000 ukuya kwi- $ 50,000 oku kuthelekiswa nexabiso eliqhelekileyo lasekhaya elixabisa i-150,000 ukuya kwi-450,000 yeedola. Kukho isixa esikhulu somahluko kumacandelo amabini enza ukuba elo xabiso litshintshe kakhulu.
Amakhaya esitayile seBarn athelekiswa neendleko zabaninzi iintlobo zamakhaya amancinci enokuthi ibe yenye indlela kwabo bathatha isigqibo ikakhulu kwixabiso.
Iikiti zeBarn House zinokuxabisa, ukuba ucwangcisa ukuyigqiba ngokwakho le projekthi, kwaye ukuba iprojekthi yakho ihlangabezana neemeko ezimbalwa.
ukunxiba kumsitho womtshato
Ngokwakha okusemgangathweni, ikhithi yendlu yokugcina kufuneka ibe yinto entle kwaye elula (xa kuthelekiswa nokwakha ikhaya eliqhelekileyo) ukuseta. Ezi ntlobo zamakhaya zibaluleke ngakumbi ekuxolelweni kwemozulu ezingafuneki zigqunyiwe okanye i-HVAC.
Ngokubanzi, iikiti zendlu zitshiphu kakhulu ekwakheni kunakwikontraka eyakhelweyo. Icala elisezantsi koku bahlala benganobomi obufanayo nala makhaya. Ziyakhawuleza kakhulu ukwakha kunokwakhiwa kwendlu eyakhiwe kwindawo.
Kuyilo olunxulumene ngakumbi ndwendwela igalari yethu amakhaya e-bardominium Apha.
Umtshakazi ehamba ezantsi iingoma zendlela
Iivesi zebhayibhile malunga nothando lwenene
thanda isikhumbuzi seminyaka ngaye
ngaba abantu bafumana imisesane yesithembiso
ilokhwe yomtshato yamagxa abanzi
Into endiyifunayo kukucaphula
ucwangcisa njani ishawa yomtshato